वीरगंज युथ एकेडेमी द्वारा गतिलो प्रहार हेटौडालाई २ गोल – Nijgadh Fast Track News, Airport News and Latest News of Nijgadh Bara Parsa Rauthat & Middle Terai Region of Nepal::: Nijgadh.com Nijgadh Samachar Bara First online News
जितलाल श्रेष्ठ ११ फागुन
निजगढमा जारी शहीद हीरालाल स्मृति तेस्रो गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको मंलवार भएको चौथो खेलमा वीरगंज युथ एकेडेमी विजयी भएको छ ।
हेटौ डा ११ मकवानपुरलाई १ का विरुद्ध २ गोल गरी वीरगंज युथ एकेडे मी विजयी भएको हो। खेल शुरु भएको चौथो मिनेटमा वीरगंज युथ एकेडे मीका जर्सीनं. ९ का सिसश थापाले पहिलो गो ल गरी खाता खोले । हेटौडा ११ का तर्फबाट ४८ औ मिनेटमा जर्सीनं. १२ का आशिष लामाले गो ल फर्काएका थिए । खे लको अन्तिम चरण ८३ औ मिनेटमा वीरगंज युथ एकेडेमीका खे लाडी जर्सीनं. १२ का चतुर्ध न चौधरीले गोल थपे पछि सोही गोल निर्णायक बन्न पुग्यो ।
खेल अवधिभर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेबापत वीरगंज युथ एकेडेमीका जर्सीनं. १२ का चतुर्धन चौधरीलाई नैंम्यान अफ दि म्याच घोषित गरिएको प्रतियोगिता आयोजक क्लबका सचिव पुरुषोत्तम भट्टराईले जानकारी दिए । उनलाई क्लबका संस्थापक उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर थापालेमेडल प्रदान गरे। बुधवार सेमीफाइनल खेल आरएफसी चितवन र बारा युथ एकेडेमीबीच हुने जनाएको छ ।
निजगढमा रेडबुल ‘सी’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता शुरू,
२०७०, ५ माघ आईतवार ०८:४३ January 19, 2014 Nijgadh.com
२०७१, २७ माघ मंगलवार १०:५८ February 10, 2015 Nijgadh.com